WBO’n haleellaa har’aaf kaleessa fudhateen magaalota hedduu dhuunfateera – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooWBO’n haleellaa har’aaf kaleessa fudhateen magaalota hedduu dhuunfateera
WBO’n haleellaa har’aaf kaleessa fudhateen magaalota hedduu dhuunfateera
WBO’n haleellaa har’aaf kaleessa fudhateen magaalota hedduu dhuunfateera.
Keelloo: Hagayya 16, 2021
Waraanni Bilisummaa Oromoo godiinaalee Lixaa fi Kibba Oromiyaa keessatti haleellaa fudhataa jiruun guyyuma guyyaan bakkoota hedduu dhuunfataa jira.
Tarkaanfiiwwan kaleessa Hagayya 15,2021 WBO’n fudhatamaniin Oromiyaa Lixaa Qondaala guutummaan dhuunfachuun WBO gabaasee jira. Uummatnis bahee simachuu isaa fi magaalattii keessaa qaamolee mootummaa lolee baasuun ibsameera.
Akkasuma guyyaa har’aa Hagayya 16, 2021 tarkaanfii fudhateen Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Nuunnuu Qumbaa magaalaa Adaree tohatee jiraachuu akkasuma uummata mariisisaa akka ture gabaasni arganne nii mirkaneessa.
Akkasuma guyyuma har’aa Waraanni Bilisummaa Oromoo WBO’n Shaggar Kaabaa Salaalee Warra Jaarsoo keessatti haleellaa guddaa fudhateen kaambii waraanaa mootummaa rukutuu isaa gabaaseera.
Qaamoleef waraanni mootummaas haleellaa WBO kana baqatanii Warra Jaarsoo gadhiisanii bahaa akka jiran gabaasa arganneen mirkaneeffannee jirra.
Tarkaanfiin WBO kun isa duuba hin deebine ta’uu ajajaan WBO torban dabarsine keessa miidiyaaleef ibsanii turan. Duula amma gaggeessaa jiranis waraana mootummaa adamsanii rukutaa jiraachuu beeksisaniiru.
Amma bobbaa garaagaraan socho’aa jiraachuu kan hime ajajaa olaanaan ABO-WBO Kumsaa Dirribaan, dhiyootti humnaaf maqaa tokkoon duula waraanaas akka gaggeessuuf jedhan miidiyaa Raadiyoo Arrata Biyyoolessaan akeekaniiru.
Gama isaan hanga ammaa waan haleellaa WBO kan ilaalchisu qaamoleen mootummaa ifatti waan dubbatan hin qaban.
Suuraa: tarkaanfii WBO’n fudhateef magaalota wayiita seenu kan agarsiisu.
Breaking News: Injifannoo WBO Guyyaa Har'aa
#Breaking_News Waraana Bilisummaa Oromoo fi Mootummaa giddutti yeroo ammaa lola guddattu adeema jira. Lola kana…
KMN: OPDO kaleessa TPLFtu ergata ODP har'a diinota Oromootu ergata.
Kush Media Network (KMN): FULBAANA 30/2019/ OPDO kaleessa TPLFtu ergata ODP har'a diinota Oromootu ergata.
RSWO | WBO'n Eenyu? Kaleessa Eessa Ture? Hanga Yoomiitti Qabsaa'a?
ODDUU Tarkanfii WBOn Oromiati Fudhataa Jirtuu
Where does the Taliban get its money and weapons from?